အိမ်နှင့် မိသားစုပိုင်လုပ်ငန်းကို ချိတ်ပိတ်တာက တော်လှန်ရေးတွင် အသက်ပေးသူတွေနဲ့ယှဉ်ပါက ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးလို့ ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဥက္ကဌကိုမင်းဟန်ထက် မှပြောကြား - News For Today
အိမ်နှင့် မိသားစုပိုင်လုပ်ငန်းကို ချိတ်ပိတ်တာက တော်လှန်ရေးတွင် အသက်ပေးသူတွေနဲ့ယှဉ်ပါက ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးလို့ ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဥက္ကဌကိုမင်းဟန်ထက် မှပြောကြား
“ခြံ၊ အိမ်နဲ့ မိသားစုပိုင်လုပ်ငန်းကို ချိတ်ပိတ်လိုက်ပါတယ်တဲ့။ပါပါးက အရင်တုန်းက မကြာခဏပြောတယ်၊ “မင်းဘွဲ့မြန်မြန်ယူတော့၊ ပြီးရင် လုပ်ငန်းတွေ မင်းကိုလွှဲချင်ပြီ၊ ငါစိတ်ဖိစီးမှုများတာတွေ မလုပ်ချင်တော့ဘူး၊ အနားယူချင်ပြီ” တဲ့။ဒီကာလမှာတော့….
ကျနော် ယုံကြည်တာတွေ ကျနော်လုပ်ရင်း မိသားစုအ ပေါ် ထိ ခ တ်မှုတွေက အတော်များခဲ့ပါတယ်၊ ၁၀ တန်းတုန်းက ပေပေတေတေနေတဲ့ ကျနော့်ကိုဘော်ဒါဆောင်ထားဖို့ ဝို င်း တို က် တွန်းကြတော့ မေမေက “ပါပါးကလည်း ကျန်းမာရေးသိပ်မကောင်းဘူး၊…
ဒီသားတစ်ယောက်တည်းရှိတာ၊ သားကို မိသားစုနဲ့ခွဲမထားချင်ဘူး” ဆိုပြီး မိသားစုနဲ့တောင် ခွဲမထားခဲ့ဘူး။အခု ပါပါးရော၊ မေမေရာ အိုးအိမ်ကိုထားပြီး အဝေးတစ်နေရာ ရောက်နေတယ်၊ ကျနော်ကလည်း သူတို့နဲ့ဝေးတဲ့ တစ်နေရာမှာ။ လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်…
သူတို့ဘယ်ရောက်လဲ၊ ကျနော်ဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတာတောင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပေးမသိထားကြဘူး။အိမ်နဲ့ ခြံကလည်း အာဏာရူးတွေရဲ့ လက်ထဲရောက်နေပြီ။ဒါပေမယ့် သူတို့ စိတ်မ ပျ က်သွားခဲ့ဘူး၊ ကျနော့်ကိုတောင် လှမ်းအားပေးလိုက်သေးတယ်၊…
‘စိတ်မပျ က်သွားနဲ့တဲ့၊ လုပ်စရာရှိတာဆက်လုပ်တဲ့’။ ဒီကိစ္စတွေက ဒီတော်လှန်ရေးမှာ အသက်တောင်ပေးခဲ့ရတဲ့သူတွေ၊ ဘဝတောင်ပေးခဲ့ရတဲ့သူတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် ဘာမှမဟုတ်သေးပါဘူး။အသက်ပေးခဲ့ရပြီးတဲ့သူတွေ၊ဘဝ ပေးခဲ့ရတဲ့သူတွေ၊ အကျဉ်းထော င်တွေထဲ၊…
တောထဲ တောင်ထဲမျာ ကိုယ်ကျိုးစွန့်နေကြသူတွေအတွ က် ပြည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ သွေ းမအေးကြပါနဲ့၊ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ဆက်ပြီး တော်လှန် ရေးမှာ ပါဝင်ပေးပါ။ဒီတော်လှန်ရေးမှ မနိုင်ရင် တချို့ဘဝတွေက ပျ က်သွားပြီ၊ အဓိပ္ပါယ်မဲ့သွားပြီဆိုတာ…
သတိရပေးကြပါ။ကျနော်တို့မှာ နောက်ဆုတ်စရာ မရှိတော့ပါဘူး၊ အဆုံးထိ ဆက်တိုးကြစို့ရဲ့…။” လို့ရေးသားထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေက ဇွန်လ ၈ရက်က ကိုမင်းဟန်ထက်နေအိမ်ကို ရှာဖွေခဲ့ပြီး ဇွန်လ ၉ရက်နေ့မှာ ချိတ်ပိတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။…
အိမ္ႏွင့္ မိသားစုပိုင္လုပ္ငန္းကို ခ်ိတ္ပိတ္တာက ေတာ္လွန္ေရးတြင္ အသက္ေပးသူေတြနဲ႕ယွဥ္ပါက ဘာမွမဟုတ္ေသးဘူးလို႔ ဒဂုံတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဥကၠဌကိုမင္းဟန္ထက္ က၎ရဲ႕လူမႈကြန္ယက္ေပၚမွာေရးသားထားပါတယ္။
“ၿခံ၊ အိမ္နဲ႕ မိသားစုပိုင္လုပ္ငန္းကို ခ်ိတ္ပိတ္လိုက္ပါတယ္တဲ့။ပါပါးက အရင္တုန္းက မၾကာခဏေျပာတယ္၊ “မင္းဘြဲ႕ျမန္ျမန္ယူေတာ့၊ ၿပီးရင္ လုပ္ငန္းေတြ မင္းကိုလႊဲခ်င္ၿပီ၊ ငါစိတ္ဖိစီးမႈမ်ားတာေတြ မလုပ္ခ်င္ေတာ့ဘူး၊ အနားယူခ်င္ၿပီ” တဲ့။ဒီကာလမွာေတာ့….
က်ေနာ္ ယုံၾကည္တာေတြ က်ေနာ္လုပ္ရင္း မိသားစုအ ေပၚ ထိ ခ တ္မႈေတြက အေတာ္မ်ားခဲ့ပါတယ္၊ ၁၀ တန္းတုန္းက ေပေပေတေတေနတဲ့ က်ေနာ့္ကိုေဘာ္ဒါေဆာင္ထားဖို႔ ဝို င္း တို က္ တြန္းၾကေတာ့ ေမေမက “ပါပါးကလည္း က်န္းမာေရးသိပ္မေကာင္းဘူး၊…
ဒီသားတစ္ေယာက္တည္းရွိတာ၊ သားကို မိသားစုနဲ႕ခြဲမထားခ်င္ဘူး” ဆိုၿပီး မိသားစုနဲ႕ေတာင္ ခြဲမထားခဲ့ဘူး။အခု ပါပါးေရာ၊ ေမေမရာ အိုးအိမ္ကိုထားၿပီး အေဝးတစ္ေနရာ ေရာက္ေနတယ္၊ က်ေနာ္ကလည္း သူတို႔နဲ႕ေဝးတဲ့ တစ္ေနရာမွာ။ လုံၿခဳံေရးအေျခအေနေၾကာင့္…
သူတို႔ဘယ္ေရာက္လဲ၊ က်ေနာ္ဘယ္ေရာက္ေနလဲဆိုတာေတာင္ တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ ေပးမသိထားၾကဘူး။အိမ္နဲ႕ ၿခံကလည္း အာဏာ႐ူးေတြရဲ႕ လက္ထဲေရာက္ေနၿပီ။ဒါေပမယ့္ သူတို႔ စိတ္မ ပ် က္သြားခဲ့ဘူး၊ က်ေနာ့္ကိုေတာင္ လွမ္းအားေပးလိုက္ေသးတယ္၊…
‘စိတ္မပ် က္သြားနဲ႕တဲ့၊ လုပ္စရာရွိတာဆက္လုပ္တဲ့’။ ဒီကိစၥေတြက ဒီေတာ္လွန္ေရးမွာ အသက္ေတာင္ေပးခဲ့ရတဲ့သူေတြ၊ ဘဝေတာင္ေပးခဲ့ရတဲ့သူေတြနဲ႕ ယွဥ္ရင္ ဘာမွမဟုတ္ေသးပါဘူး။အသက္ေပးခဲ့ရၿပီးတဲ့သူေတြ၊ဘဝ ေပးခဲ့ရတဲ့သူေတြ၊ အက်ဥ္းေထာ င္ေတြထဲ၊…
ေတာထဲ ေတာင္ထဲမ်ာ ကိုယ္က်ိဳးစြန႔္ေနၾကသူေတြအတြ က္ ျပည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ ေသြ းမေအးၾကပါနဲ႕၊ ကိုယ္တတ္နိုင္တဲ့ဘက္ကေန ဆက္ၿပီး ေတာ္လွန္ ေရးမွာ ပါဝင္ေပးပါ။ဒီေတာ္လွန္ေရးမွ မနိုင္ရင္ တခ်ိဳ႕ဘဝေတြက ပ် က္သြားၿပီ၊ အဓိပၸါယ္မဲ့သြားၿပီဆိုတာ…
သတိရေပးၾကပါ။က်ေနာ္တို႔မွာ ေနာက္ဆုတ္စရာ မရွိေတာ့ပါဘူး၊ အဆုံးထိ ဆက္တိုးၾကစို႔ရဲ႕…။” လို႔ေရးသားထားပါတယ္။စစ္ေကာင္စီတပ္ေတြက ဇြန္လ ၈ရက္က ကိုမင္းဟန္ထက္ေနအိမ္ကို ရွာေဖြခဲ့ၿပီး ဇြန္လ ၉ရက္ေန႕မွာ ခ်ိတ္ပိတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။…